I-FTC kwaye Musa ukuKhangela
NgoLwesithathu, nge-26 kaJanuwari 2011 NgoMvulo, Septemba 28, 2020 Douglas Karr
Sele zininzi iindaba malunga nesicelo se-FTC seenkampani ze-Intanethi ezenza ukuba izixhobo zixhobise abathengi ukuba bangalandelelwa. Ukuba ubungalifundanga iphepha elili-122 Ukuba bucala ingxelo, ungacinga ukuba i-FTC yayiseta uhlobo oluthile lomgca esantini kwindawo abacela ukuyibiza Musa ukulandelela.
Yintoni i Musa ukulandelela?
Zininzi iindlela zokuba iinkampani zilandele indlela yokuziphatha kwabathengi kwi-intanethi. Eyona idumileyo, ewe, zicookies zebrawuza ezigcina idatha kunye nolwazi njengoko unxibelelana nesiza. Ezinye iicokies zilapha iqela lesithathu, Oko kuthetha ukuba umthengi unokulandelelwa kwiziza ezininzi. Kananjalo, kukho iindlela zokufaka idatha kwiifayile zeFlash… ezi azinakuphelelwa kwaye azicimi gca xa ucoca ii-cookies kwisikhangeli sakho.
Musa ukulandelela yinto ezinokuthi zikhethwe yi-FTC enokuxhobisa umthengi ukuba ayeke ukulandelwa. Olunye uluvo kukuchaza nje xa intengiso ibekwa ngedatha elandelelweyo, enika umthengi ukuba aphume ekubanjweni kwedatha nakwintengiso. Olunye uluvo oluvela kwi-FTC kukuba, endaweni yoko lubonelele Ngqo ngexesha idatha enokusetyenziswa ngemvume yomthengi ukubeka intengiso efanelekileyo.
Nangona i-FTC izenzile ezi ngcebiso… kwaye icebisa kancinci ukuba ukuba umzi mveliso awuzanga nento, banokuthi… bakwamkele iziphumo zetekhnoloji. Inyani yile yokuba abathengisi abanoxanduva kunye neenkampani ezikwi-Intanethi zisebenzisa idatha yokuziphatha ukuze zivelise amava angcono, afanelekileyo omsebenzisi. I-FTC iyakuvuma oku ngokuthi:
Nawuphi na umatshini onjalo akufuneki ujongele izibonelelo ezinikwa zizibhengezo zentengiso ezikwi-Intanethi, ngokuxhasa ngemali umxholo we-intanethi kunye neenkonzo kunye nokubonelela ngentengiso esenzelwe wena ngabathengi abaninzi
Ingxelo yaNgasese iyaqhubeka ichaze ukuba nayiphi na irejista esembindini njengoko injalo Suku Call uluhlu alubonakali kwaye aluzukujongwa njengesisombululo. Ingxelo yabucala ye-FTC, ngokwayo, iphakamisa imibuzo emininzi:
Njani indlela enjalo zenziwe kubathengi kunye nokwaziswa?
Ungayilwa njani lo matshini ube njenge icacile kwaye iyasebenziseka njengoko kunokwenzeka kubathengi?
Ziziphi iindleko ezinokubakho kunye nezibonelelo yokubonelela ngesixhobo? Umzekelo, bangaphi abathengi
Ngaba unokukhetha ukunqanda ukufumana intengiso ejolise kuyo?
Bangaphi abathengi, ngokugqibeleleyo kunye nepesenti, abayisebenzisileyo izixhobo zokuphuma okwangoku?
Yintoni enokwenzeka mpe mbelelo ukuba inani elikhulu labathengi likhethe ukuphuma?
Iya kubachaphazela njani abapapashi be-Intanethi kunye nabathengisi, kwaye inokwenzeka njani zichaphazela abathengi?
Ngaba umxholo we Inkqubo yokhetho jikelele Yandiswa ngaphaya kwentengiso yokuziphatha kwi-Intanethi kwaye ubandakanye, umzekelo, intengiso yokuziphatha kwezicelo zeselfowuni?
Ukuba icandelo labucala alisebenzisi ngokuzithandela indlela efanelekileyo yokukhetha efanayo, ukuba kunjalo i-FTC ukucebisa umthetho efuna indlela enjalo?
Ke… akukho sizathu sokwethuka ngeli xesha. Musa ukulandelela ayisiyonto eqinisekileyo. Uqikelelo lwam kukuba alunakuze lwamkelwe ngabantu. Endaweni yoko, ukuqikelela kwam kukuba ingxelo iya kukhokelela kubucala obucacileyo kunye nokulandela umkhondo kwiindawo (kwi-Facebook). Ayisiyonto imbi leyo, ndicinga ukuba uninzi lwabathengisi abasemthethweni bayazixabisa izitatimende zabucala ezomeleleyo nezicacileyo.
Ndingathanda ukubona ngokobuqu iibrawuza zamkela ukungena kunye nokuthumela imiyalezo ebonelela abasebenzisi ngempendulo ecacileyo xa kuqokelelwa idatha yabo, ngubani oyigcinayo, kunye nendlela esetyenziswa ngayo ukubonisa intengiso efanelekileyo okanye umxholo onamandla. Ukuba umzi-mveliso unokubonelela ngemigangatho ethile, iya kuba yinkqubela phambili enkulu kubo bobabini abathengi kunye nabathengisi ngokufanayo. Ngolwazi olongezelelweyo, ndwendwela i- Musa ukulandelela intsebenziswano iwebhusayithi.
tags: sukufowunaungazilandeliftcngqo ngexesha